အာရုံ ..အာရုံ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computer & Cell Phone » အာရုံ ..အာရုံ
Posted by ムラカミ on Dec 19, 2012 in Computer & Cell Phone, Computers & Technology, Consumer Electronics | 17 comments
အစ … ခုမှ အစ ရှိသေးတာ …။ ကံကောင်းမှာလား ကံဆိုးမှာလား မိညီမ ရယ်…
(အလဲ့ .. ခေါ်လို့ကောင်းသဟ …)
သည်လိုဗျ … တလောက ဘစ်ဘရားသား လို့ ခေါ်တဲ့ IBM ကြီးက ထကြေငြာတယ်။
အနာဂါတ် ကွန်ပျူတာတွေဟာ အာရုံ၅ပါး ကို ခံစားသိရှိနိုင်မယ်တဲ့ …။
IBM Research ဆိုတာ တော်ရုံတန်ရုံ ဌာနတခု မဟုတ်လေတော့ တကမ္ဘာလုံး ခေါင်းထောင်ကြည့်ရတာ
မဆန်းဘူးပေါ့ဗျာ .. ဆိုတော့ ။ အထိအတွေ့ ၊ အသံ၊ အနံ့၊ အရသာ၊ အကြား စတဲ့ အာရုံ ငါးပါးကို
Computer တွေ ဘယ်လို ခံစားနားလည်နေကြပြီလဲ၊ ဘာတွေက ဘယ်လို လမ်းစတွေ တွေ့နေပြီလဲ ဆိုတာ
IBM’s Five in Five
IBM ရဲ့ ယခုနှစ်ကုန် ခန့်မှန်းချက် ဖြစ်ပါတယ်။ အနာဂါတ် computing ဟာ အာရုံခံ computing ဘက်ကို
နောင် လာမယ့် ၅နှစ်အတွင်း အာရုံငါးပါးကို ကွန်ပျူတာတွေ ခံစားသိရှိဖို့ ဖြစ်လာနိုင်တော့မှာပါတဲ့။
အနာဂါတ် ခရီးရှည်ကြီးအတွက် အခုအချိန်ဟာ ကနဦး အစ ဖြစ်တယ် လို့လည်း ဆိုထားပါတယ်။
လူသားတွေကိုယ်စား အာရုံ ငါးပါးကို ခံစား၊ တွေးခေါ် တုန့်ပြန်ဖို့ အတွက် ကနဦးခြေလှမ်းကို
ကွန်ပြူတာတွေဟာ ပတ်ဝန်းကျင်ကို နားလည်ဖို့ သင်ယူဖို့ နဲ့ တုန့်ပြန်ဖို့ ဖြစ်လာနိုင်တော့မှာပါ။
ဥပမာအားဖြင့် … ကွန်ပျူတာတလုံးဟာ ရထားဥအော သံကို ကြားနိုင်မယ် သံလမ်း တုန်ခါမှုကို သိရှိမယ်
ဆိုရင် ယာဉ်တစီးစီး လာနေပြီဆိုတာကို ခံစားနားလည်နိုင်ပြီး ဒီနေရာကနေခွာဖို့ လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မှာပါ..။
IBM ဟာ smartphones တွေ tablets ဟာ haptics နည်းပညာကို သုံးပြီး စကားပြောစရာမလိုဘဲ
အရာဝတ္ထုတွေ ဘယ်လို အထိအတွေ့ရှိတယ်ဆိုတာ လူတွေအချင်းချင်း communicate လုပ်နိုင်လာစေဖို့
Haptic feedback ကို ယခုပင်လျင် နေရာအတော်များများမှာ အသုံးပြုနေကြပြီဖြစ်ပါတယ် ။
(၂၀၁၂မှာ physical keyboard က ခလုပ်တွေလို အဖုအထစ်တွေကို ထိတွေ့ခံစားနိုင်တဲ့ virtual keyboard-touchscreen တချို့ ထွက်ပေါ်လာပြီ ဖြစ်ပါတယ်)ဒါပေမယ့် ဒါဟာ အခုမှ လုံးဝ အစပဲ ရှိပါသေးတယ်။
ဖိအား၊ လှိုင်းနဲ့ အခြားသော ထိတွေ့မှု ပုံစံမျိုးစုံ ဟာ အသစ်ပေါ်ထွန်းလာဖို့ ရှိပါသေးတယ်။
အမြင်အာရုံဟာလည်း ပိုမို တိုးတက် ထွန်းကားလာဖို့ ရှိနေပါတယ်။
Tags တွေကို အသုံးမပြုဘဲ ကွန်ပြူတာတွေဟာ ပုံရိပ်တွေကို ပိုမိုနားလည်ခံစားလာနိုင်မယ်လို့
IBM က ယုံကြည်ထားပါတယ်။ ကျနော် 6th sense မှာ တုန်းကရေးဖူးပါတယ် အနှီ MIT စမ်းသပ်ချက်က
စာအုပ်တစ်အုပ် ကို barcode ဖတ်ရုံနဲ့ amazon.com မှာရှိတဲ့ စာအုပ်ရဲ့ ရောင်းအား, review, ဈေးနှုန်း
စတာတွေကို သိရှိနားလည်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး ဒီစာအုပ်ကို အကဲဖြတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ယခုနှစ်ရဲ့ နောက်ထပ် ထင်ရှားတဲ့ ဥပမာကတော့ Google Glass ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုပါစို့ အနှီ မျက်မှန်နဲ့
စားသောက်ဆိုင် တဆိုင်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ (Geotagging အပါအ၀င် အခြားနည်းပညာတွေနဲ့)
ဆိုင်ရဲ့ ယနေ့ အထူးဟင်းလျာdiscount coupon, လူပြည့်နေ မပြည့်နေ customer review ဒါတွေအကုန်ကို
နတ်မျက်စိရသလို သိနိုင် ဆုံးဖြတ်နိုင်တော့မှာပါ။
ဆေးပညာဘက်ကိုကြည့်ရင်လည်း ဆရာဝန်တွေကို X-ray pictures တွေ magnetic resonance imaging
(MRI) machine ultrasound နဲ့ အခြားသော computerized tomography scansတွေ ဖတ်ရှုဖို့
ကူညီပေးနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုပါစို့ ECG ဆွဲတယ်ထား၊ ဒီလူနာရဲ့ နှလုံးခုန်သံဟာ ပုံမှန်ဟုတ်မဟုတ်
ဆိုတာကို ထွက်လာတဲ့ လှိုင်းတွေကို ဆရာဝန် အလွတ်ကျက်ထားတဲ့ ဦးနှောက်ထဲက ပုံမှန်လှိုင်းနဲ့
တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေး အဖြေထုတ်ရပါတယ်။ ဒါက ရှေးကနည်းပါ။ နည်းနည်း ထပ်ကွန့်ချင်ရင်တော့
normal pattern ကို print ထားတဲ့ ဖလင်ပြားနဲ့ ထပ်ကြည့် ကပ်ကြည့်ရုံလောက်သာ တတ်နိုင်ခဲ့တာပါ။
နောက်ဆိုရင်တော့ အများကြီး ကွဲပြားခြားနားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ ဆွဲထားတဲ့ ECG ကိုကြည့်တာနဲ့
Normal နဲ့ ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လိုကွဲပြားနေတယ်။ ဘယ်လို ကွဲပြားခြင်းမျိုးဟာ ဘယ်လို ရောဂါကြောင့်
ဖြစ်နိုင်တယ် စတဲ့ information တွေကို ထုတ်ပေးနိုင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
အသံဘက်မှာလည်း တိုးတက် ဖြစ်ပေါ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ ကွန်ပြူတာတွေ အသံကို ကြားနိုင်
နားလည်တုန့်ပြန်လာနိုင်ပါပြီ။ အကောင်းကြီးမဟုတ်သေးပမယ့် Apple ရဲ့ Siri ဟာ voice recognition
အတွက် အလွန် သိသာတဲ့ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု တခုပါ။ နောက်ထပ် ဥပမာကတော့ ရှေးမဆွကပင်
Cellphone တွေကတဆင့် အိမ်မှာကျန်ခဲ့တဲ့ သော့ရဲ့ remote control ကတဆင့် ကားတံခါးဖွင့်ခိုင်းလို့
ရတဲ့ feature တို့ပါပဲ…။ ဒီနေရာမှာ ရှင်းပြရရင် remote control က ထုတ်လိုက်တဲ့ လူ့ အာရုံခံအင်္ဂါ
ဖြစ်တဲ့ နား နဲ့ မကြားနိုင်တဲ့ frequency မှာရှိတဲ့အသံကို ဖုန်းကနေ ဖမ်းယူသယ်ဆောင်ပေးပြီး ကားတံခါး
က sensor ကို ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တာပါပဲ။
ဒီအတွက် နောက်ထပ် ဥပမာကောင်းတခုရှိပါသေးတယ်။
Mosquitone လို့ ခေါ်ပါတယ်။ လူ့နားကနေ မကြားနိုင်တဲ့ frequency မှာရှိတဲ့ အသံ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာ ခြင်က ကြားနိုင်တဲ့ range ထဲမှာရှိပါသတဲ့ ..။ ဆိုတော့ အဆိုပါ အသံကို ဖွင့်ထားရင်
(လူကတော့ မကြားရလို့ အနှောက်အယှက်မဖြစ်ပေမယ့်) ခြင်အတွက်တော့ နားအူစေပါသတဲ့..
သည်တော့ Computer ဟာ အငွေ့မထွက်တဲ့ မော်ဒန် ခြင်ဆေးခွေ ဖြစ်လာပါတော့တယ်။
ကုန်ကျစရိတ်နဲ့ ကျန်းမာရေး ရှုထောင့်တွေက ကြည့်ရင် သမားရိုးကျ ခြင်ဆေးခွေတွေထက်
အများကြီး ဂရင်းပိုဖြစ်လို့ အပ္ပလီတွေ ရှာပြီး ဒေါင်းကြပါကုန်…။
ဟုတ်ပါတယ်…။ အသံညစ်ညမ်းမှုဟာ မြို့ပြလူနေမှု စနစ်အတွက် အလွန် စိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့
အချက်တခုဖြစ်ပါတယ်။ သည်တော့ ကွန်ပြူတာတွေဟာ ယခုထက်ပိုပြီး အသံတွေကို ခံစားနားလည်
တုန့်ပြန်လာနိုင်မယ်ဆိုရင် မြို့ပြ အသံ ညစ်ညမ်းမှု အတွက် အတော်လေး အကျိုးပြုမှာပါ။
ဥပမာ သတိပေး အလမ်း တွေ၊ ကြော်ငြာတွေ အလှူခံတွေကို လူမကြားနိုင်မယ့် frequency နဲ့သာ
ထုတ်လွှတ်ပြီး လူတွေ ရဲ့ device တွေထဲကို လိုအပ်တဲ့ information အချက်အလက်သာ ရောက်ရှိစေခြင်း
virtual taste buds တွေပါမယ့် အနာဂါတ် ကွန်ပြူတာတွေဟာ (ရနံ့အပါအ၀င်) အရသာတွေကို
တွက်ချက် လာနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး စားဖိုမှူးတွေကို ပိုမိုတိကျကောင်းမွန်တဲ့ (လက်မှန်တဲ့) ဟင်းလျာတွေ
ချက်ပြုတ်လာနိုင်ဖို့ ကူညီပေးနိုင်တော့မှာပါ ။
ဒီ Systems တွေရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံကတော့ ဟင်းလျာတွေမှာပါဝင်ဖွဲ့စည်းမယ့် ဓါတုပစ္စည်းတွေ
ဘယ်လို ဓာတ်ပြုမယ် လူ့နှာခေါင်းနဲ့ လျှာကို ဘယ်လို သက်ရောက်မယ်ဆိုတာ ကို တွက်ချက်တဲ့နည်းနဲ့
လို့ ဆိုပါတယ်။ အစားအသောက်တွေရဲ့ အာဟာရတန်ဖိုး ကိုလည်း သိရှိနေမှာမို့ weight gain, weight loss
အပါအ၀င် healthy ပိုဖြစ်မယ့် အစားအသောက်တွေကို အရသာရှိရှိ ဘယ်လိုစားသင့်တယ် ဆိုတာကို
ညွှန်းဆိုပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ (လူဝကြီးများ ၀မ်းမြောက်ဖွယ်)
နောက်ဆုံးမှာတော့ အနံ့အကြောင်းကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ အနာဂါတ်ကွန်ပြူတာတွေဟာ
ဖျားနာနေတဲ့လူ ၊ အသည်း၊ ကျောက်ကပ်၊ ဆီးချိုနဲ့ တီဘီ ဝေဒနာ စတာတွေ ရှိမရှိကို အနံ့ခံပြီး
diagnose လုပ်ပေးလာနိုင်မယ် ဆိုပါတယ်။
ကားမောင်းစဉ် အရက်သောက်သုံးထားမှု ကို တိုင်းတာတဲ့ Breathalyzer နဲ့ လုပ်ဆောင်ပုံ
တူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ပြူတာတွေဟာ ရောဂါတွေက ထုတ်လွှတ်တဲ့ မော်လီကျူးအဆင့်
အနံ့တွေကို အာရုံခံနိုင်လာမယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
အနာဂါတ်အတွက် IBM က ယုံကြည်နေတာကတော့ mobile devices တွေမှာ ဖြစ်ထွန်းလာမယ့်
အာရုံခံ စွန့်ဦးတီထွင်မှု၊ cloud computing နဲ့ social media တွေဟာ အကန့်သတ်မဲ့တဲ့ ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကို
သယ်ဆောင် ပေးလာနိုင်မယ် လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
အာရုံ …အာရုံ ကို ဖတ်ပြီး ဘုရား… ဘုရား…ပဲ “တ” ချင်တော့တယ်ကွယ်။
ကိုယ် အဖွားကြီးဖြစ်တာနဲ့ အညီ တိုးတက်နေသော တက်ကနိုလော်ဂျီ……….
ဒါပေမဲ့ Taste မှာပါတဲ့ System လေးတော့ အကြိုက်သားလား။ :harr:
ပုံမှာ ပါတယ် အစ်မ ရေ …လူ့ဦးနှောက်ကထွက်တဲ့ electromegnetic wave ကို Sense လုပ်တဲ့ Sensor
အမျိုးမျိုးအထွေထွေသော စိတ်အခြေအနေ ခံစားချက် အခြေအနေတွေမှာ မတူညီတဲ့ လှိုင်းတွေ ထုတ်
ပါသတဲ့ အဲ့ဒါတွေကို ခု ဓါတ်ခွဲခန်းတွေမှာ စမ်းသပ်ပြီးစီးသလောက် ဆိုပါတော့ …
အထူးပြုထားတဲ့ စက်ကြီးတွေမှာ အာရုံခံနိုင်တဲ့ sensor ရဲ့ အစွမ်းတွေကို သာမန်အိမ်သုံး
စမတ်ဖုံးတွေထဲ သယ်လာနိုင်ရင် ကလေး ငိုတာနဲ့ အမေ က ဗိုက်ဆာလို့လား ဗိုက်နာလို့လား အိပ်ချင်လို့လား
နေမကောင်းလို့လား အလွယ်တကူ သိလာနိုင်မယ် တဲ့ခည..
sixth sense .. sixth sense
ဒါဆို လူတယောက်စိတ်ဆိုးရင်တောင် ဟန်ဆောင်တာလား အတည်လား တောင် စစ်နိုင်မယ်ထင်တယ်။ စိတ်တိုရင်လည်း သတ်ပစ်ချင်စိတ်ပေါက်နေပြီလား စိတ်ပြေနေပြီလား
ဒါလည်း စစ်နိုင်တော့မယ်ဆိုရင် လူတွေကို ပိုပြီး ထဲထဲဝင်ဝင် ဆက်ဆံလာနိုင်ပြီး
ပိုနားလည်လာနိုင်တဲ့ အတွက် ဘ၀တွေ ပိုသာယာနိုင်ခြေရှိတာပေါ့
ကြည့်ရတာ ဗေဒင်ဆရာတွေတောင် ထမင်းငတ်နိုင်တယ်
ဗေဒင်ဆြာ ၊ ဆရာဝန်မှမဟုတ် ..သာမန်လူတွေရဲ့ capability မြင့်တက်လာမှာမို့
ပရို မစစ်တဲ့ ဟိုမရောက်ဒီမရောက် တွေ နေရာပျောက်မယ်လို့ ဆိုချင်ပါတယ်…
အနှီ ပစ္စည်းတွေဟာ ရှေ့ဖြစ် မဟောနိုင်တဲ့အတွက် ဗေဒင်ဆြာ ထမင်းမငတ်နိုင်သလို
တကယ်တမ်း know how ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဆရာဝန်လည်း နေရာမပျောက်နိုင်ပါ။
စက်ပစ္စည်းသုံးလာလို့ getting smarter လို့ ဆိုတဲ့ ကိစ္စမှာ ၀ိရောဒိ တချို့လည်း ရှိသေးသဗျ..
ဥပမာ ကျောင်းတွေမှာ calculator သုံးခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အခါ
အဆိုးဘက် အမြင်အနေနဲ့ ကျောင်းသားတွေ အလီ အလွတ်ရတဲ့ စွမ်းရည် ကျဆင်းသွားတယ် လို့ ဆိုသလို
အကောင်းဘက် အမြင်အနေနဲ့ကတော့ အလီကျက်မယ့် အချိန်တွေကို တခြားသော study
လုပ်နိုင်တယ် ဆိုတဲ့ ကိစ္စပါပဲ ….
ဆိုတော့ ကောင်းတာ ဆိုးတာထား အလီမကျက်ဘဲ တခြားတခုခုလေ့လာနေမယ့်အစား
အိပ်နေရင်သာ လူ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကျတာလို့ မြင်မိပါတယ်။
တဖက်မှာလည်း ဒါတွေသာ မသုံးရတဲ့အချိန်မှာ အရေးပေါ်သုံးနိုင်မယ့် (ချတွက်တဲ့နည်း) လောက်ကိုတော့
သင်ကြားတတ်မြောက်ထားဖို့ လိုမယ်လို့ ထင်ပါကြောင်း…
စစ်ကိုင်းချောင် အန်တီပူးခ်ျသို့ ရီပလိုင်းလိုက်ရပါတယ် ခီညာ..
ဒါဆိုလဲ ကွန်ပူတာ ၀ယ်မလို့ဟာ ဒီကွန်ပူတာ ပေါ်လာမှဘဲဝယ်တော့မယ်…
ဖုန်းတွေ ၊ကွန်ပျူတာတွေ နည်း ပညာတွေ ဘာတွေ ပဲ ပေါ်လာလာ ကျုပ်တို့ လို အဖွား ကြီးတွေ ကတော့ ဖုန်း ဆိုရင် ပြော ရုံ နဲ့ ကွန် ပျူ တာဆို စာရိုက်ရုံ၊ အင်တာနက် ကြည့် ရုံ ပဲ သုံး တတ်တယ်။ အိမ်က လူကြီး ကတော့ ညဉ်းပြောတဲ့ ခြင်ဆေး ကို ဖုန်း ထဲ တင်ထား ပေးတယ်။ လူတွေ မကြား နိုင်တဲ့ အသံ ဖရီ ကွမ် စီ ကို ခြင်တွေ က ကြား ပြီး မခံ နိုင် ဘူး လို့ သူလည်း ရှင်းပြ ပါတယ်။ မယုံဘူး ၊ တကယ်ပြေး မပြေး ကိုယ့် ပြည် ပြန် မှ စမ်း ကြည့် ရ အုံး မယ် ဆိုလို့ ကျုပ်ကို ယူ ထားတဲ့ ဘွဲ့ မှ အား မနာ၊ တုံး လွန်း အားကြီး တယ်တဲ့ အားပေးတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သုံးတဲ့ သူတွေ အဆင်ပြေသထက် ပြေ အောင် ထွင်လည်း ထွင် တတ်တဲ့ သူတွေ တော့ ချီး ကျုးပါတယ်အေ။
တခါက မောင်ဂီ ပို့စ်တင်ဖူးတဲ့
ဖုန်းကတဆင့် ရေမွှေးပုလင်းကြော်ငြာဆိုပြီး လွှင့်မယ် ဖွင့်ကြည့် ရှုမိမှ အီးဗုံး ဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်နေတာ လိုမျိုး တကယ်ဖြစ်တော့မှာပေါ့
အသက်(life)ကို.. လက်ဘ်(Lab) မှာလုပ်ပြီး.. ချက်ပြုတ်စားသောက်ကြဖို့.. အချိန်လည်း.. သိပ်မဝေးတော့ပါဘူး..
ဒွန္နယာကြီးမှာ.. နောင်.. အနှစ်၅၀တောင်ခံပါ့မလားဟင်င်…
လိုက်မမီလောက်အောင်ကို ဖြစ်နေတော့တာပါပဲ …
ကျုပ်တို့ဆီမှာ တက်လေးကို စတင် အသုံးတွင်ကျယ်စ ရှိသေးတယ် …
ခုတော့ .. ကိုရင်ဂီ အရင်က ရေးခဲ့သလို ..
တေ့စ် စမဲ တွေကို စိတ်ကူးနေကြပြီ ….။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒါတွေ ပေါ်တဲ့ အချိန်ထိတော့ အသက်ရှည်ချင်သေးတာပဲ ….
ဒါ့ထက် တစ်ခု စဉ်းစားမိတာက …
ဆရာကြီး ရွှေဥဒေါင်းရဲ့ ဟိုစာအုပ်ထဲကလို …
ဒီပစ္စည်းတွေကို ဟိုးးးး အရင်တုန်းက လူတွေရော တီထွင်ခဲ့ဖူးပြီးသားလား ဆိုတာကို
အနာဂတ်မှာ ကွန်ပျူတာတွေဟာ အာရုံငါးပါးကို သိရှိခံစားလာနိုင်တော့မယ်ဆိုတော့
အဲ့ဒီအာရုံငါးပါးခံစားနိုင်ပြီဆိုတဲ့ ကွန်ပျူတာဟာ အာရုံ ၅ ပါးကနေ ကိလေသာတွေ ဖြစ်နိုင်တာပေါ့။
အဲ့ဒီလိုများ ဖြစ်လာခဲ့လို့ရှိရင် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်ကြီးတွေအနေဖြင့် လူတွေကိုတင်မကဘဲ
ကွန်ပျူတာတွေကိုပါ ကိလေသာ ကင်းစင်ကြောင်းတရားတွေ ဟောရတော့မှာပေါ့ ။
အာရုံငါးပါး အနိစ္စဆိုတာကြီးကို ကွန်ပျူတာတွေက မြင်အောင်ရှု့တတ်ပါ့မလား။
အားပေးသွားပါကြောင်း မောင် ကြက် သရေ ဂီး ရေ…………
စက်တွေက အချုပ်အားဖြင့်0or 1 ဒါပဲသိတာဗျ
သူတို့ကို ကိုယ့်ကိုယ်စား အာရုံခံခိုင်းမယ်ဆိုရင်
သူတို့က လက်ရှိ အခြေအနေ ကိုသာ ဟုတ်တိုင်းမှန်ရာ ထုတ်ပြကြမှာ.
ဆိုတော့ ကိုရင် စိုးရိမ်တာ ဖြစ်လာနိုင်စရာမရှိဝူး ပြောပါရစေ
အဲ့. တခုလေးပဲဗျ. ဒီလို condition ဆို ဒီလို ဖြေဟဲ့လို့ ခင်ဗျား ကျနော်
Preference ထည့်ထားရင်တော့. ဒါဟာ ကျနော်တို့ရဲ့ အတ္တသက်သက်သာဖြစ်လို့
အချုပ်ပြောမယ်ဗျာ. တောက် ငါးနှစ်နေတဲ့အခါ ခင်ဗျားရဲ့ အာရုံငါးပါးကို
တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံစရာမလိုဘဲ. ခင်ဗျား အာရုံငါးပါးရဲ့ ကိုယ်စားလှယ် ဆန်ဆာတွေက
ခင်ဗျားကိုယ်စား တုန့်ပြန်ပေးမယ်. အလုပ်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတာပါပဲ
Think different ပါကွယ်.
ဟိန္ဒူအယူ(အခုတော့ မြန်မာထေရ၀ါဒအယူ) အရ..
လူတွေလည်း. .ရှေးးးးးက..(ကမ္ဘာပျက်ပြိး.. ကမ္ဘာပြန်ဖြစ်တော့..) ကိလေသာမ၇ှိ.. ဖြစ်ရပ်ပျက်(-1, 0, +1) ဒစ်ဂျစ်၃ခုနဲ့တဲ့..။
ဆိုင်တွေမှာ အဲ့သည်အိုင်အမ်ဘီ ပီစီ ပုံးတွေက ဈေးအကြီးဆုံးဘဲလို့သတိထားမိတယ်
ကွန်ပြူတာတွေဟာ နောင်ဆို နိဗ္ဗာရောက်ကြောင်း သစ္စာတရားတွေကိုလည်း သိမြင်နိုင်မယ်လို့ဆိုခြင်သလားခင်ဗျား
သီအိုရီအရတော့ ဟုတ်မှာပေါ့နော်၊ သိပ္ပံပညာနဲ့ ပြီးပြည့်စုံနဲ့လောကဂျီး တည်ဆောက်နိုင်ပြီပေါ့။ လက်တွေ့မှာ တကယ်ဖြစ်ရဲ့လား။ အခြားမကြည့်နဲ့ သိပ်ခေတ်မှီပါတဲဆိုတဲ့ သဂျီးအမျိုး အမေရိကန်စစ်တပ် အီရတ်နဲ့ အာဖဂန်နစ္စတန်မှာ ဘယ်လိုအဆော်ခံရသလဲဆိုတာ၊ ဟိုကောင်တွေက ဘာမှကြီးကြီးကျယ်ကျယ်သုံး ပြန်မချဘူး။ ခြုံခိုတိုက်တယ်၊ ကားဗုံးထောင်တယ်၊ အသေခံဗုံးခွဲတယ်၊ အလစ်ဝင်ပစ်တယ်။ ကောင်းကင်းက ဂြိုလ်တုလည်း မတတ်နိုင်၊ ပက်ထရီရော့ ဒုံးခွင်းဒုံးလည်း မကယ်နိုင်၊ ဆူပါဆွန်းနစ် စတဲ့လ့်သ် ဗုံးကြဲလေယဉ်ပျံလည်း ထိုင်ကြည့်နေရတယ်…. ဗျဲ
၁၈-၁၉ရာစု စက်မှုတော်လှန်ရေး ဖြစ်တော့ မကြာခင်ကာလမှာ လောကနိဗ္ဗာန် ပေါ်ထွန်းပြီ မှတ်ကြဝမ်းသာကြတာပဲ၊ ဖြစ်လာတော့ ကမ္ဘာစစ်၊ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှု၊ မျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု၊ ပတ်ဝန်းကျင်ပျက်ဆီးမှု၊ ရာသီဥတု ပူနွေးလာမှု၊ ရောဂါအသစ်အဆန်းများ…… တကယ်ပဲ လောကဂျီး တိုးတက်လာရဲ့လား ကုံလုံကြွယ်ဝလာရဲ့လား သိချင်စမ်းပါဘိ… :kiw:
အခုဆိုရင် ကွန်ဇာဗေးတစ် အပြာထောင့်က လက်ဝှေ့ကျော် ကိုကိုကြောင် ကနေ
လစ်ဘရယ် အနီထောင့်က သဂျီးကိုဝိုက်လက်သီး တစ်လုံး ပစ်သွင်းလိုက်ပါပီ ခီညော်…